ခင်ဦးသာ| January 25, 2013 | Hits:9,225
63 Responses LeaveaReply Cancel reply
ရာဇာ January 25, 2013 - 5:04 pm ဦးလှဆွေ က စစ်သားဟောင်း ဆိုတော့ စစ်ရေးနဲ့ ဖြေရှင်းဘို့ အကြံပေးတာ မဆန်းပါဘူး…သူဒီလောက် စိတ်သန် နေတယ် ဆိုရင်းလဲ သူ့ကို စစ်ဆင်ရေးမှူး ခန့်ပြီး ကိုယ်တိုင် သွားပြီး တိုက်ခိုင်းလိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့….သဘောတူကြရင် လွှတ်တော်မှာ ဒီအဆိုကို တင်းသွင်းကြပါ….
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 26, 2013 - 3:52 am အဲသည် လူကြီးကို စစ်ဆင်ရေးမှုးခန့်ပြီး ကိုယ်တိုင် ရှေ့တန်းမှာ စစ်သားလေးတွေနဲ့ လက်ရေတပြင်စီး သွားတိုက်ခိုင်းရင် ခဏပဲ ရမယ် ထင်တယ်။ နောက်ကြောကျည်မှန်မှာ သေချာတယ်။
Reply ရာဇာ January 28, 2013 - 1:05 pm နောက်ကြော ကျည်မမှန်ခင် သေနပ်ပြောင်းပြန် ပစ်မိလို့ ဟုတ်ပ ဖြစ်နေမှာ…ဒုဗိုလ်မှူးကြီး နဲ့ဘဲ အပြင်ရောက်သွားတာသာ ကြည့်တော့…..
Reply Tsa Doi La January 25, 2013 - 5:19 pm KIA should not only fight imperialistic Burmese troop, but also USDP, all the parties will also fight against USDP in the next election…then USDP will be vanished from the earth….remnants of USDP should also be trialed too.
Reply minko January 25, 2013 - 5:36 pm အင်း- ဒီလို အတွေးအခေါ်မျိုးတွေနဲ့ ပါလီမာန်ထဲရောက်လာတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိလဲမသိဘူး-တိုင်းပြည်ကတော့ ငြိမ်းချမ်းတော့မယ်-သုဿန်တစပြင်လိုပေါ့- လူတယောက်မှ မရှိတော့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးပေါ့- လူကလေး မောင်လှဆွေ ကချင်ကို အပြုတ်တိုက်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရမယ်ထင်လား- အသက်ချင်းထပ် လောင်းရအောင်လေ- မငြိမ်းချမ်းရင်- စစ်တပ်က ဘယ်တော့မှ နိုင်ငံရေးမှာ မပါတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိပေးမလား- အာဏာ အရသာကို စွဲမက်နေတာက –ဟင်း-ဟင်း- ကေ-အိုင်-အေ- မဟုတ်ဘူး-တိုင်းပြည်ကို လူထုဆန္ဒ မပါဘဲ လက်နက်နဲ့ ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးနေတဲ့ စစ်တပ်ဗျ-စစ်တပ်- ဒီလိုစစ်တပ်က တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပါနေသမျှ တိုင်းပြည် ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းချမ်းဘူး- ဘယ်တော့မှ အခြေခံလူထု ဘ၀ မတိုးတက်ဘူး-မသိရင် မှတ်ထား-
Reply Jane Doe January 27, 2013 - 8:39 am I agree with you. Our dream to democratic union seems evaporating and disappearing now. Too many idiots and stooges are in the house in Nay Pyi Taw.
Reply hu aik January 25, 2013 - 5:51 pm သောက်သုံးမကြတဲ့ကြံ့ဖွံ့က ဘာတွေရှောက်ပြောနေသလဲ? ဘာကြောင်းပြချက်နဲ့အဲဒီလိုပြောရ လဲ? အပြတ်ချေမှုန်းလို့ရမယ်ထင်လား? Union of Myanmar ဆိုတာဘာလဲ? ကျွန်တော်က “၀” လူမျိုးတယောက်ပါ။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 26, 2013 - 3:58 am သောက်သုံးမကျတဲ့ ကြံ့ဖွတ်က သူတို့ အဖွဲ့ရဲ့ အတွင်း စိတ်ထားမှန်တွေ လာပြောနေတာ နေမှာပေါ့။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ကချင်မြေမှာ ကျောက်စိမ်း လုပ်ခွင့်၊ တခြားစီးပွားရေး လုပ်ခွင့် ဂွင်တွေ သူတို့ အပိုင်လိုချင်လို့ ဖြစ်မယ်။ မြစ်ဆုံကို တရုတ်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြန်ပေးချင်လို့ ဖြစ်မယ်။ Union of Myanmar ဆိုတာ သူ့ပထွေး ပေးတဲ့ အမွေလို့ သူတို့ ထင်နေပုံပဲ။ ကျွန်မက ဗမာလူမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေ ကို တန်းတူထား လေးစားတယ်။ ဗမာတွေက တပန်းသာတယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေး၊ လက်မခံဘူး။ လူတယောက်ရဲ့ တန်ဘိုးဟာ လူမျိုးနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းပဲ။ လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်းမှာ လူတော် လူကောင်းတွေ ရှိသလို လူဆိုး လူညံ့ လူယုတ်မာတွေ ရှိတယ်။ သောက်သုံးမကျသူတွေလဲ အပြည့်ပဲ။
Reply Jane Doe January 27, 2013 - 8:49 am Dear Hu Aik
Reply Yangonite January 25, 2013 - 6:33 pm Irrawaddy editors, can you at least add the party affiliations beside the names of the parliamentarian that you refer to in the articles? Please do not assume that every reader knows the names of the member of parliament and which party they are representing.
Reply Jane Doe January 27, 2013 - 8:53 am Hla Swe is ex-military man and now representing USDP. He is not representing the people but USDP(United S****rs D**gy P**ps).
ReplyaJanuary 25, 2013 - 6:51 pm စိတ်ရင်းအမှန်တွေကိုသိရတာပေါ့၊ဒီလိုအသိဥာဏ်မျိုးနဲ့အုပ်စုကိုယုံကြည်ဖို့၊အကောင်းမြင်ဖို့ပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအံ့သြတယ်။အမှောင်ဖုံးနေတဲ့လူတော်တွေကိုလည်းအမြင်မှန်ရဖို့(အမှန်မြင်နိုင်ဖို့)ဆုတောင်ပေးပါတယ်။
Reply YeAg January 25, 2013 - 7:08 pm အရင်က အဖြစ်တွေကို ခဏ ဘေးဖယ်ထားပြီး လက်ရှိအခြေအနေကို လက်တွေ.လုပ်ကြည့်တာ ခေတ်နဲ.ညီမယ်လို.ယူဆမိပါတယ်။ တကယ့်နိုင်ငံရေးသမား /ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ကတော့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ရှိခြင်း ဆိုတာကို ရှက်စရာ လို.မယူဆတတ်ကြပါဘူး။ KIA ခေါင်းဆောင်တွေက ရှက်စရာလို.ထင်ပြီး ပြောင်းလဲမပေးသေးတာက အဖြေလို.ထင်ပါတယ်။ အစိုးရပြောတဲ့အတိုင်း တဆင့်ပဲ လိုက်လျောပေးပြီး တကယ်ပဲ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါတဲ့ညီလာခံ မလုပ်ပေးဘူးဆိုမှ လက်ရှိစွဲကိုင်ထားတဲ့မူကို ဆက်လုပ်ပေါ့။ ဒါဆို ကမ္ဘာ ကလဲ ထောက်ခံမှာပဲ၊တိုင်းရင်းသားအားလုံးတင် မကဘူး နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ အားလုံး ပါလာလိမ့်မယ်။ပြည်သူတွေလဲ အသက်ရှူချောင်မယ်၊(လူသစ်တောင် ပိုပြီးစုဖို.အချိန်ရသေးတယ်)။ လက်ရှိအတိုင်းကတော့ KIA အသာရ ဖို.မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မီဒီယာဆိုတာ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ရှိပါတယ်၊ဖွလဲ ခဏပဲရမယ် ။အမှန်တရာဆိုတာ အကြာဆုံ(၃)ရက်လောက်ဆပေါ်လာလိမ့်မယ်။
Reply steven January 27, 2013 - 12:43 am Ko yeag’s say seems to be practical. But the other tribes of mm, incl KIA, hv been deceived by those burmse nationalists, since the time of chan tun, u nu, nay win. We the signatories of the panlong agreement, incl KIA, can no longer afford to entertain the game the big brass would like to play around with us. This is the fact and more practical than you say.
Reply angel January 27, 2013 - 8:18 pm Yeag KIA က တစ်ဆင့်လျှော့ပေးပြီးခဲ့ပြီးပြီ။ ၁၇နှစ်တောင်စောင့်ကြည့်တာကြာ
Reply ဌေးဝင်း January 25, 2013 - 7:19 pm ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးလှဆွေ… ဘယ်လိုများဒု ဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်ခဲ့တာလဲမသိဘူး…….ခင်ဗျားအဆင့်လောက်နဲ့ဒု-ကာကွယ်ေ၇းဦးစီးချုပ်ကို…ပညာပေးနေတာလား…..နာတော့မယ်နော်။…စစ်အ၇ည်အချင်းမမှီလို့..လွှတ်တော်ထဲေ၇ာက်လာတာလဲ..မမေ့နဲ့ပေါ့။
Reply pps၁၂၃၄၅ January 28, 2013 - 9:57 pm စစ် နည်းနည်း တိုက်ဖူးသော ကိုလှဆွေက စစ်မတိုက်ဖူးပဲ ကောင်းဘွိုင် စတိုင် ဖမ်းနေသော မင်းအောင်လှိုင် ထက်ပို၍ မိုက်ပြခြင်း…
Reply ဌေးဝင်း January 25, 2013 - 7:25 pm ဗမာစစ်တပ်က…လူ ၅၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ KIAလောက်ကို…တကယ်တိုက်၇င်..နှိုင်ပါတယ်…အခုဟာက..လုပ်ပွဲကြီးပါလို့…ပြောနေ၇တာလဲမောလှပြီ…
Reply မင်းမင်း January 25, 2013 - 7:32 pm ကေအိုင်အေက ငြိမ်းချမ်းရေးသွားမယူဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက ငြိမ်းချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကချင်ပြည်နယ်လည်း တစ်သက်လုံး ဖွံ့ဖြိုးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူမှာ အပြစ်ရှိသလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
Reply @-@ January 25, 2013 - 7:56 pm အလို… ဦးလှဆွေ
Reply angel January 27, 2013 - 8:22 pm ဟုတ်ပါတယ်တော်တော်ယုတ်ညံ့တဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ကြံ့ဖွတ်အမတ်ပေါ့။
Reply Shim Shim January 25, 2013 - 9:06 pm နိုင်ငံရေးအမြင်မရှိတဲ့ ငဆွေကတော့ … ရာသီချိန်ရောက်ပေမဲ့ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဂါရ၀လေးတွေ ရှယ်ယာလေးတွေမလာသေးတာလောက်နှင့်ပေါက်ကွဲပြီပေါ့ဗျာ…. ဖေကြီးချွှေ ဖေကြီးချွှေ… သားသားဆွေချားမလို့ဟာ… ဆလန်ကဘာတို့က မပေးချားဘူး..
Reply sawwainyo January 25, 2013 - 9:57 pm အပြတ်ချေမှုန်းရေးဆိုတာ လက်လွတ်စပယ် မပြောသင့်ပါဘူး။ ဒီစကားပြောတာတောင်မှလွန်
Reply United State of Burma January 25, 2013 - 10:04 pm ဒီအတိုင်းဆို …KIA ပြီးရင် တခြား အဖွဲ့ တွေကိုလည်း ဒီလိုနည်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သွားမှာဘဲ….. ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးက SSPP/ SSA ၊ပလောင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ၊RCSS/SSA ၊KNPP၊ KNU တွေကို တောက်လျောက် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်တော့မယ် နောက်တစ်ဆင့်DKBA နဲ့ တခြားအဖွဲ့ ငယ်တွေကို အသွင်ပြောင်းခိုင်း နောက်ဆုံး မှာ ”၀” အဖွဲ့ UWSA နဲ့ မိုင်းလား အဖွဲ့ NDAA-ESS ကို အရင် ချေမှူန်းထားတဲ့ အင်အား၊ အသွင်ပြောင်း သြဇာခံလာတဲ့ အဖွဲ့ ငယ် အင်အားတွေကိုသုံးပြီး တိုက်မယ်
Reply hu aik January 28, 2013 - 9:23 am “၀” ကိုတော့သွားမထိနဲ့ဗျ, တော်ကြာနေမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ပြာကျသွားအုံးမယ်။
Reply shingran brang January 25, 2013 - 10:14 pm ဦးလှဆွေဟာ တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အင်အားစု အားလုံးကို စော်ကားသွားတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ သူဟာ အခုထိ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြဿနာ အရင်းအမြစ်ကို မသိသေးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူများနိုင်ငံက မကောင်းတဲ့ အနိဌာရုံတွေကိုပဲ အတုယူတတ်ပြိ
Reply mya hnaung nyo January 25, 2013 - 10:37 pm ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်ထူး၏ ဆွေးနွေးချက်ကို ပြည်ချစ်တပ်မတော်သားအသွင် မြင်တွေ့ရသောကြောင့်ထောက်ခံပါသည်။
Reply castle January 25, 2013 - 10:56 pm brain မရှိလို့ ပြောတာပါ။
Reply ဖဖီ January 25, 2013 - 11:02 pm သူတို့ဆန္ဒနဲ့သဘေါထါးအမှန်ကိုတကမ္ဘာလုံးချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့လွှတ်တေါ်ထဲမှာတေါင်ဆွေးနွေးနေကြပြီဆိုတေါ့၊ငြိမ်းချမ်းရေးယူထါးတဲ့အဖွဲ့တွေအတွက်မျက်ခုံးလှုပ်စရာဘဲ။ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေငြိမ်းချမ်းရေးကိုဘူးလက်နဲ့လဲကြပါ။
Reply mal sawma January 25, 2013 - 11:05 pm Realy ugly and unbelieving !!!!!!!how worst is our country!!!!! let recall ours past !!!!we are union ,,,,we are not like japan and U S,, alright ,,, killing men is not peace ,,, let them peace and free,,,keep in tender and lovely !!!!I thinks that is God ,, Jesus and buhda and alahs,,Ok ,,, last !!!!!You can kill men but not mind,.
Reply သုဝဏ္ဏ January 26, 2013 - 12:36 am ဒါဆိုငြှိလို့ မရတဲ့အရပ်ဝတ်လဲကြံ့ဖွတ်အစိုးရကို ဂျပန်ကိုဗုံးကြဲသလို ဝင်ဆော်မှဘဲအေးချမ်းသွားမယ်။
Reply KnooKnow January 26, 2013 - 1:40 am အိုးး ရူးသွပ်မိုက်မဲလိုက်လေ မောင်လှဆွေ…လိုင်ဇာသိမ်းလို့ ကေအိုင်အေပြုတ်ရိုးလား၊ ကချင်တိုင်းက ကေအိုင်အေ၊ ကေအိုင်အေတိုင်းက ကချင်ဆိုတာ မောင်မင်း သတိမမူမိဟန်တူပါရဲ့ကွယ်…မောင်မင်း ငယ်ငယ်က အိမ်စာမကျေခဲ့ဘူးနဲ့တူပါတယ်… ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သေချာပြန်ရေးကြည့်ပါဦး မောင်ရင်
Reply la January 26, 2013 - 10:37 pm That`s RIGHT
Reply steven January 26, 2013 - 2:27 am Let this horrible thug move away from his post. What he speak is not public voice.
Reply kachin brother January 26, 2013 - 2:31 am U Hla Shwe, pasawn ‘prawn’ brain. b***s**t!
Reply ဟတ်ချိုး January 26, 2013 - 5:31 am ခါးကြားသေနတ်ထိုးတဲ့လူတန်းစားတွေ ဒီလို လူမိုက်စကားပြောတာ မဆန်းပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာမှမပြောင်းလဲသေးပါဘူးဆိုတာ ထင်ရှားနေတာပဲ။
Reply Mr Kian January 26, 2013 - 7:26 am In Fact, All Burma army generals and leaders are Idiot , Crazy, Selfish. Thats why Singapore Senior Leader Lee Kuan Yew called them, MAD Leaders from Burma…
Reply Nai dhanaraejae January 26, 2013 - 9:16 am For peace there is no need to annihilate to KIA, our country condition will be peaceful, if USDP disappear from earth.
Reply သဲသဲ January 26, 2013 - 10:00 am ဝေလွင်က တပတ်အတွင်း(Dec 14-20,2012) အပြတ်တိုက်မယ်ပြောတယ်။ မရတော့ ဦးစိုးသိန်းကသမတထံ နောက်ထပ်တပတ်တောင်းပေးတယ်၊ နောက်သုံးရက်ထပ်တောင်းတယ်။
Reply ကချင်မြေ January 26, 2013 - 10:49 am ဦးလှဆွေ ရဲ့ သားသမီးနှင့်ဆွေမျိုးတွေကို စစ်မြေပြင် အရင် လွတ်ကြည့် လိုက်ပေါ့ 
Reply ကချင်မြေ January 26, 2013 - 10:55 am ဦးလှဆွေ ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ ကချင်ပြည်နယ် သယံဇာတတွေဆိုတာ မမေ့ရင် ကချင်အပြတ်ချေမှုန်းရေးစကား ပြောခြင်းဟာ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးကန်းတာပါဘဲ။
Reply R.zar January 26, 2013 - 2:53 pm ဦးအောင်ဆန်းက ဖက်ဆစ် စနစ် ဆိုသည်မှာ သူတစ်ပါး ဒေသ ကို ၀င်ရောက် အုပ်ချုပ် ကာ စီးပွားရေး ဂုတ်သွေး စုပ်သော စနစ်ကို ခေါ်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
Reply မြန်မာပြည်သား January 27, 2013 - 5:27 pm ဦးလှဆွေ ပြောသော စကားသည် စစ်အရာရှိကြီးများ၏ သားသမီးများ နှင့် စစ်သားများ ပြင်ပတွင် ပြောလေ့ရှိသော စကားဖြစ်ပါသည်။
Reply mya hnaung nyo January 26, 2013 - 4:05 pm တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်အကြင်နာတရားလုံးဝမရှိတဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဦးလှဆွေရဲ့အာဘော်ကိုနာကျည်းစွာကန့်ကွက်ပါတယ်။
Reply မြန်မာပြည်သား January 27, 2013 - 5:31 pm တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ် စာနှာထောက်ထား တယ်ဆိုပြီး အပြတ်ရှင်းတဲ့ စစ်သားတွေ ရှိနေသ၍ တိုင်းပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Reply PEACEMAKER January 26, 2013 - 4:34 pm အမေရိကန်က ဂျပန်ကို ဗုံးကျဲလိုက်လို့ ဂျပန်က လက်နက်ချလိုက်တယ်၊ အဲဒါမှန်တယ်၊
Reply Khaing Linn Aung January 26, 2013 - 7:19 pm အတြမ်းဖက်သမားကို တိုက်နေတာလား
Reply angel January 27, 2013 - 8:29 pm ဟုတ်တယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာRSO ကသူတို့စစ်တပ်ကိုဝင်ဆော်တာနှစ်
Reply Khaing Linn Aung January 26, 2013 - 7:26 pmှုI disagree what U Hla Swe said.
Reply မင်းမင်း January 26, 2013 - 9:37 pm ဦးလှဆွေကို စစ်ဆင်ရေးမှူးသာ ခန့်လိုက်ရင် ကေအိုင်အေဌာနချုပ်ကျတာ ကြာလှပြီထင်တယ်နော်။
Reply တင်မင်းအောင် January 26, 2013 - 11:54 pm မြန်မာနိုင်ငံက လွတ်တော်အတွင်း စစ်သွေးဆာနေတဲ့ လူတွေဘယ်လောက်တောင်များနေပြီလဲ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဟာ နိုင်ငံကို ကောင်းအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူက သတ်ဘို့ဖြတ်ဘို့ ပြောနေတယ် ဒီလိုဆိုရင်တော့ တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို ဗုံးကြဲလိုက်မှ တစ်နိုင်ငံ လုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာဗျ ဦးလှဆွေရေ အဲဒီလိုသာ လွတ်တော်မှာ တင်သွင်းလိုက်ရင် ခင်ဗျား ချက်ခြင်း သမ္မတတောင်ဖြစ်နိုင်တယ် စစ်ရေးအတွေ့အကြုံထက်ပိုတဲ့ စစ်သွေးဆာအရည်အချင်းရှိသူအဖြစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခင်ဗျားတစ်ဦးတည်း ရာသက်ပန်သမ္မတ တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ် …
Reply Jane Doe January 27, 2013 - 8:35 am No wonder this idiot man Hla Swe is from USDP. Do we need to waste our time to comment? Absolutely idiot man from idiot party. Military and USDP? They are still in 17th century.
Reply Zaw Kyi January 27, 2013 - 9:02 am I am so sorry that USDP has this kind of members at Hlutdaw. The spots and stripes they have proved that people will not cast their votes for the in 2015 election. I am glad that Hla Swe reveals the true color of USDP.
Reply Zaybine January 27, 2013 - 11:21 am How come he becameamember Government withasuch narrow minded and s**t brain.? Still talking rubbish and must think before you speak. “S**T HEAD U Hla Swe”
Reply မြန်မာပြည်သား January 27, 2013 - 5:34 pm “S**T HEAD က သိန်းစိန် နှင့် သန်းရွှေ ပါ။
Reply kjit January 27, 2013 - 2:48 pm ဒီကြံဖွတ်တော့ကွား…မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ သတိထားရတော့မယ့်အနေအထားဟုတ်ပြီ။ ဒီဗမာတပ်ကို တိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါင်းပြီးတိုက်ရင် တလလောက်ပဲကြာမယ်ထင်တယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ကရင်တွေ ရန်ကုန်အင်းစိန်အထိ သိမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ရာဇ၀င်တွေရှိတယ်…ကျေးဇူးရှင်လို့ခေါ်ရမယ့် ဗမာတွေကို ကချင်တွေက ပြန်ကယ်တင်ခဲ့တယ်.. ၀ အဖွဲ့ကိုတော့ ဘာမှမပြောရဲဘူးနော်..ဗမာစစ်တပ်က..ဒူးတွေတုန်ပြီးကြောက်နေမယ်ထင်တယ်…ရယ်ချင်တယ်..ကချင်တွေကိုလည်းမရပါဘူး…သွေးကြွေးတွေက ပြန်ဆပ်ရမှာပါ..
Reply kyaw January 27, 2013 - 7:00 pm the dods idea show to public,,.
Reply rocker January 27, 2013 - 9:41 pm (ပုံစံခွက်စားတစ်ယောက်ရဲ့သံချေးတက်ဦးနှောက်)…..ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာတော့မင်းသားက
Reply kyawmintun January 28, 2013 - 12:36 am ၂၁ ရာစု ပင်လုံမခေါ်သရွေ့မညှိနိုင်းသရွေ့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူး..ကျွန်တော့်တို့ လူငယ်တွေဒါကို ယုံကြည်တယ်…
Reply than January 28, 2013 - 5:00 am If u want to get really peace we must to kill all burmese tat ma daw,so tht no more terrorist in union of Myanmar.
Reply Mr_rednose January 28, 2013 - 1:28 pm Hi Hla Swe,
Reply ဂျောက်ဂျက် January 30, 2013 - 7:27 pm ကိုလှဆွေ၊ ငယ်တုန်းက သမိုင်းဘာသာ စာမေးပွဲမအောင်ဘူးနဲ့တူတယ်၊ နောက်ပြီး ကောလိပ် တို့၊တက္ကသိုလ်လည်း မတက်ခဲ့ဘူးနဲ့တူတယ်။ သမိုင်းလေ့လာမှု နဲ့ အကြောင်းအရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု မှာ ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်ကားသမားလောက်တောင် အရည်အချင်းမရှိဘူးဘဲ။ ဒီနေ့တော့ ကိုလှဆွေ ကို အခမဲ့ လက်ချာပေးလိုက်အုံးမယ်။ US က ဂျပန်ကို ဗုံးကြဲတာ နှစ်နိုင်ငံ (သို့) တကမ္ဘာလုံး ကိစ္စလေ၊ သိရီလကာ က တမီးလ် သူပုန် ကို တိုက်ခိုက်တာ က ခွဲထွက်တာကို မလိုလားလို့ ပေါင်းစည်းရေးအတွက်။ အဲတာတွေကို နမူနာယူလိုက်ရင် တပ်မတော်အနေနဲ့ ၁) ကချင်နိုင်ငံ ရှိပြီးသားလို့ လက်ခံပြီးရမလိုဖြစ်နေပြီ ၂) KIO ကို ခွဲထွက်ဖို့ ထောက်ခံနေသလို (သူများက မခွဲထွက်ဘဲ ဖက်ဒရယ်မူဝါဒ လက်ကိုင်ထားတာကို အတင်းသွား ခွဲထွက်ခိုင်းသလို) ဖြစ်နေတယ်။ ဥပမာ ပေးချင်လည်း ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဥပမာ နဲ့ လက်ခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကြိုးစားပြီး ရှာပါအုံး လွတ်တော်အမတ်ရယ်……………. ခီးခီးခီး။
Reply s.m.l March 30, 2013 - 6:05 pmှဗုံကြဲလို့အဆင်ပြေသွားတာကနည်းပါတယ်နိုင်ငံတော်တ်ာများကဒီနည်းကိုမသုံးတော့ပါ။ကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကမသုံးတော့ပါ။အခုအများနိုင်ငံသုံးနေတာကကွဲပြားမူ့တွေးကိုနိုင်ငံအင်အားဖြစ်သုံးနေတဲ့ခေတ်ဗျ။အတူလက်တွဲပြီးတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်ဖော်ဆောင်ကြတာပါလူနည်းစုကောင်းစာဘို့အတွက်သယံဇာတတွေးကိုဖျက်စီးတာတော့ဘယ်ရမလဲ။ကချင်တိုင်းရင်းသာလူနည်းစုကိုလေးစာပါတယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ရင်သယံဇာတပျက်စီးကုန်မှာပေါ့။သူတို့ပြည်နယ်ကိုကာကွယ်တာပါ။စစ်တပ်ကဘာကြောင့်တိုက်တာလဲသူတို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးနယ်မြေဖြစ်မေလို့ပေါ့။သမ္မတတောင်းအမိန့်ပေးလို့မရဘူးဆိုတာတော့နည်းနည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်။နောက်တခုအရေးကြီးတာကစစ်တပ်မှာငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မူ့တွေးဝင်ငွေထွက်ငွေတွေးအားလုံးကိုအယောက်တိုင်းကိုဥပဒေနဲ့အညီစစဆေးဘို့လိုပါတယ်။